ထရိတ်ဒါတိုင်းအတွက် $၅၀ဘောနပ်စ်. အိပ်မက်မဟုတ်ပါ.
FBSရဲ့ပရိုမိုးရှင်းအသစ်ပါ. ဘောနပ်စ်လိုချင်ရင် လုပ်ရမှာက ဘောနပ်စ်အကောင့်ဖွင့် ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ အီးမေးလ်ကို အတည်ပြုပေးပြီး နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအချက်အလက်တွေကို verifyလုပ်ပေးလိုက်တာနဲ့ သင့်ဘောနပ်စ်အကောင့်ထဲ $၅၀ရောက်လာမှာပါ. အမြတ်ငွေထုတ်ချင်ရင်လဲ လွယ်ပါတယ်. Lot၂လော့ပြည့်အောင်ထရိတ်ပြီး အမြတ် ၂၅$နဲ့အထက်ရအောင်လုပ်လိုက်တာနဲ့ ဘယ်အချိန်မဆို အချိန်မရွေးအမြတ်ငွေထုတ်ယူနိုင်ပါလိမ့်မယ်. အရမ်းကိုလွယ်တဲ့စည်းကမ်းချက်လေးတွေပါ. ဒါကြောင့်မြန်မြန်လေး ဘောနပ်ရယူလိုက်ပါ. ပြီးရင်လဲ ကွန်းမန့်ထဲမှာ မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ ထင်မြင်ချက်လေးတွေ ရေးပေးသွားကြပါဦး. ဒီပရိုမိုးရှင်း အစီအစဉ်ကိုအားလုံးပဲ နှစ်သက်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်. အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေသိရဖို့ ဤနေရာကိုနှိပ်လိုက်ပါ.